Skype for iPhone izao dia mamela antsika handefa hafatra horonantsary | Vaovao IPhone
Skype for iPhone izao dia mamela antsika handefa hafatra horonantsary
Skype ho an'ny iPhone dia nohavaozina amin'ny kinova 4.9 hanampiana fampiasa iray izay nambaran'izy ireo andro vitsivitsy lasa izay: ny azo atao ny mandefa hafatra horonantsary maimaim-poana. Ny fepetra tokana tokony hihaonan'ireto hafatra ireto dia ny faharetany maharitra telo minitra.
Mandefa hafatra an-tsary amin'ireo olona mifandray aminao araho fotsiny ny torolalana etsy ambany:
Tsindrio ny bokotra hafatra amin'ny horonan-tsary
Atombohy ny fandraketana amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra mena afovoany
Raha tsy faly amin'ny valiny isika, dia afaka mamerina ny fandraisam-peo alohan'ny handefasana azy amin'ny mpandray azy.
Raha tianay ilay horonan-tsary dia afaka manampy lohateny sy famaritana fanampiny izahay.
Ireo horonan-tsary alefanay rehetra horaisin'izy ireo izy ireo na dia tsy mifandray amin'ny Skype aza. Amin'ny manaraka miditra amin'ny serivisy fiantsoana horonan-tsary izy ireo dia ho hitany ny fandraketana nalefanay ho azy ireo. Ataovy ao an-tsaina fa ity serivisy fandefasana hafatra vaovao ity dia mifanaraka amin'ny iOS, Android, Windows 8, OS X ary Blackberry.
Ho fanampin'ny fanampiana hafatra an-tsary, Skype ho an'ny iPhone dia nanatsara ny fitoniana sy ny kalitaon'ny antso, zaraina azo antoka kokoa ny sary, ary farany, ny bibikely dia namboarina ary nohatsaraina ny fitoniana amin'ny ankapobeny.
Toy ny mahazatra dia azonao atao misintona ny kinova farany an'ny Skype ho an'ny iPhone amin'ny fipihana ity rohy manaraka ity:
Skype ho an'ny iPhonemaimaim-poana
Fanazavana fanampiny - Skype dia mamela antsika handefa hafatra horonantsary amin'izay tadiavintsika
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Skype for iPhone izao dia mamela antsika handefa hafatra horonantsary
boriky dia hoy izy:
Ny zavatra ratsy fotsiny dia ny fianjerany avy amin'ny ios 7 beta 2
Mamaly an'i Ass
Cristhian Camilo dia hoy izy:
Rahoviana izy ireo no manavao ny fampiharana?
Valiny tamin'i Cristhian Camilo
Mahazo hafatra 19 maimaimpoana sisa tavela ary raha te-ho bebe kokoa aho dia tokony ho mpampiasa skype premium… =)